[Topnews:-] Gudigga International Crisis Group oo sheegay iney Somalia foolaneysa dagaal sokeeye iyo colaad qabiil kadib markii Farmaajo diiday inuu doorasho galo
Sunday April 18, 2021 - 08:16:11 in Wararka by Super Admin
Waaagacusub.com - Warbixintaan waxaa soo saaray guddigga International Crisis Group . Xiisad ayaa cirka isku shareertay kadib go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ee uu labo sano ugu kordhiyay madaxweynaha xilka haya. Wada-hawlgalayaasha dibadda wa
Waaagacusub.com - Warbixintaan waxaa soo saaray guddigga International Crisis Group . Xiisad ayaa cirka isku shareertay kadib go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ee uu labo sano ugu kordhiyay madaxweynaha xilka haya. Wada-hawlgalayaasha dibadda waa inay si deg-deg ah isugu yeeraan - oo dhexdhexaadiyaan - wada-hadallada u dhexeeya hoggaamiyeyaasha murugsan ee dalka, si looga hortago xiisadda siyaasadeed ee ugu xumeyd ee sannado ka soo kororta.
Qalalaasaha siyaasadeed ee Somalia oo muddo dheer soo jiitamayay wuxuu galay waji cusub, oo qatar ah. Kalfadhi si deg deg ah loo qabtay 12kii Abriil, xubnaha baarlamaanka ee gollaha shacabka waxay u codeeyeen sharci dib u dhigaya doorashooyinka laba sano, taas oo macnaheedu yahay kordhinta muddada xafiiska Mohamed Abdullahi "Farmaajo”. Tallaabadan ayaa ah mid cabsi gelinaysa shacabka, waxaana ka dhalan kara khilaaf gacan ka hadal ah oo ballaadhan illaa garabyadda siyaasadda ku soo noqdaan miiska wadahadalka.
Mucaaradka ayaa la sheegay inay ka fikirayaan inay soo dhisaan dowlad barbar socota tan Farmaajo , iyadoo xiisadii siyaasadda isu bedeshay colaad qabiil oo u dhaxeeysa Hawiye iyo Mareexaan;
Mucaaradka diidan Farmaajo waxay wacad ku mareen inaysan aqbali doonin waqti kororsigiisa ku dhisan sharci daradda .
Saaxiibbada Caalamka ee Soomaaliya, oo uu hoggaaminayo Midowga Afrika (AU) oo ay taageerayaan Mareykanka, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub, waa inay u soo baxaan abaabulidda - iyo hoggaaminta - wada-hadallo cusub oo dhexmara dhammaan daneeyayaasha si loo dejiyo khariidad loo maro doorashooyinka waqtigooda ku dhaca.
Aaminaad darrada ka hor istaagtay siyaasiyiinta Soomaaliya inay soo diyaariyaan doorashooyinka ayaa si buuxda loo soo bandhigay bilihii ugu dambeeyay.
Madaxweyne Farmaajo iyo hoggaamiyeyaasha unugyada dowlad-goboleedyada Soomaaliya, oo loo yaqaan dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah federaalka, waxay ku heshiiyeen qaab-dhismeedka doorashada dadban 17-kii Sebtember 2020. Laakiin in kasta oo dhowr wareeg oo wada-hadallo xigay ay socdeen, haddana waxay si isdaba joog ah ugu fashilmeen inay ka shaqeeyaan nidaamka cod-bixinta. Ka dib markii uu dhamaaday mudadii afarta sano ahayd ee Farmaajo ee 8 Febraayo,
Mucaaradka waxay codsadeen inuu xukunka ku wareejiyo dowlad kumeel gaar ah oo uu hogaaminayo raiisul wasaaraha.
Isku day ay Mucaaradka Farmaajo doonayeen iney ku dhigaan banaanbaxyo ay ku cadaadinayaan qodobkaan waxey kala kulmeen dagaal, weerar, dil uu Farmaajo u adeegsaday Ciidankii Qaranka oo siyaasadda uu ku milay. iyadoo iska hor imaad dhexmaray booliiska iyo banaanbaxayaasha ay ku dhinteen ugu yaraan sideed qof.
Saaxiibbada dibadda ee Soomaaliya ayaa markaa ku boorriyay wadahadallada in lagu xalliyo ismari waaga. Laakiin dhinacyadu waxay si adag ugu murmeen goobta, ajandaha iyo qabanqaabada amniga. Markii ugu dambayntii ay ku shireen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, halkaas oo ay waardiyeeyaan ciidamada Midowga Afrika, gorgortankii ayaa burburay afar maalmood ka dib.
Iyagoo ka jawaabaya, Farmaajo iyo taageerayaashiisa waxay go'aansadeen inay sare u qaadaan saamiga iyagoo u yeeray baarlamaanka si loo bilaabo muddo kordhinta , iyadoo Midowga Musharaxiinta iyo Xisbiga badbaado Qaran ee Mucaaradka ay horey ugu eedeeyeen inuu sii qorsheeystay Farmaajo oo wada hadaladda ka aheyn daacad.
Intii lagu guda jiray kalfadhigii gaarka ahaa ee uu isugu yeeray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cabdiraxmaan Mursal, mudanayaashu waxey qaarkood ku doodeen inuu guuldareeystay heshiiskii 17-kii Sebtember , kaas oo noqday mid aan macquul aheyn in la fuliyo. Waxay markii dambe u xil saareen Guddiga Qaranka ee Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka in ay ku qabtaan doorashooyin codbixin guud muddo laba sano ah. Madaxweynaha ayaa labo maalmood kadib saxiixay sharciga.
Go'aankii baarlamaanka wuxuu u diray xiisadaha siyaasadeed cirka isku shareeray heerar aan sanado badan lagu arkin Soomaaliya - taas oo barafka u horseedi karta rabshado laba arrimood oo muhiim ah awgood. Marka hore, muddada kordhinta rasmiga ah waxay jabisay heerarkii kalsoonida ee awalba ka hooseeyay jilayaasha siyaasadda ee iska soo horjeeday Mucaaradka Farmaajo ayaa isugu soo baxay bannaanka Golaha Musharaxiinta Madaxweynaha, isbaheysi ay ku jiraan labo madaxweyne hore iyo ra’iisul wasaare hore. Waxay matalayaan deegaanno muhiim ah oo qabaa’il ah, oo ay ku jirto Muqdisho, waxayna si kulul u cambaareeyeen muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo, iyagoo ballan-qaaday tallaabo aan la cayimin. Musharixiintaan mucaaradka waxay xulafo la yihiin madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo Puntland iyo Jubaland. Farmaajo ayaa dhankiisa ku raaxeysanaya taageerada hogaamiyaasha ka kala socda gobolada federaalka ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Dhibaatada ayaa si aad ah u tijaabisay isku-dhafka ciidamada iyo booliska jilicsan ee Soomaaliya.
Tan labaad, dhibaatadu waxay si aad ah u tijaabisay wadajirka ciidamada iyo booliska taagta daran ee Soomaaliya. Saacado ka hor baarlamaanka inuu shiro si loogu codeeyo muddo kordhinta, taliyaha booliska Muqdisho Saadiq "John” Cumar ayaa cambaareeyaywaxa uu ku sifeeyay awood xoog oo uu ku amray raggiisa inay xiraan albaabka laga galo dhismaha, isagoo ku doodaya in baarlamaanka waqtigiisii ​​uu ka dhacay. Taliyaha Booliska Jeneraal Xasan Xijar Cabdi ayaa isla markiiba shaqada ka eryay Cumar wuxuuna u diray ciidamo ilaaliya goobta. Ilo wareedyo amni oo wanaagsan ayaa Crisis Group u sheegay in tiro askar ah oo ka tirsan cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee uu tababaray Turkiga ee Gorgor ay tan iyo markii ay ka baxeen saldhiggoodii ay dib ugu laabteen meelihii ay ku xoogganaayeen. Odayaasha ka soo jeeda beelahan ayaa sidoo kale u sheegay Crisis Group in isku day kasta oo ay masuuliyiintu ku doonayaan inay hubka uga dhigaan ciidamadooda ay abuuri doonto dagaal rasmi ah. Markasta oo ay dhibaatadu sii dheeraato, waxaa sii weynaanaya khatarta ah in dilaacyadan ay sii koraan, taasoo sare u qaadaysa daawashada ku noqoshada dagaallada sokeeye.
Xallinta xiisadda ma sahlanaan doonto. Farmaajo ayaa qoday, isagoo uga digay jilayaasha ka baxsan inay ka baxaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Waqtiga go'aanka baarlamaanka - laba maalmood ka hor bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan - waxaa loo badiyaa in loo qorsheeyay in lagu xadido awooda mucaaradka in ay dhigaan banaanbaxyo waqtiga ay soomaalida badankood sooman yihiin. Dadweynaha, mucaaradka ayaa ku falceliyay xakameyn. Si gaar ah, si kastaba ha noqotee, waxay ka shaqeyneysaa sidii loo hubin lahaa in Farmaajo uusan helin wadadiisa. Haddii siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay ku dhaqaaqaan sameynta dowlad is barbar socota, dabka ayay ku sii kordhinayaan shiddada waxayna u diri doonaan xiisadaha cirka isku sii shareeraya.
Maaddaama Kooxda Dhibaatadu ay si joogto ah u dooddo , ma jirto wax lagu beddelan karo dhexdhexaadin saddexaad oo dhinac saddexaad ah oo lagu joojinayo caqabadaha doorashooyinka, iyada oo la tixgelinayo kalsooni darrada ka jirta jilayaasha Soomaaliya. Waagii hore, diidmada ka imaanaysa shisheeyaha ee ah inay si toos ah wax ula qabtaan waa la fahmi karay, ugama yarayn ku adkaysiga Muqdisho ee ah inay heshiis dhex mari karto wadahadallada ay Soomaalidu garwadeenka ka tahay. Sheegashadaasi hadda ma sii jirto. Taa baddalkeeda, dhibaatada sii kordheysa waxay khatar ku tahay inay dib u dhigto dhammaan horumaradii laga sameeyay aasaasidda degganaansho siyaasadeed ee Soomaaliya labaatankii sano ee la soo dhaafay. Intaas waxaa sii dheer, ismari waaga siyaasadeed iyo isqabqabsiga ka dhex jira ciidamada amniga ayaa fursad u furay maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa ku dhiiraday bixitaanka qayb ka mid ah ciidammada Itoobiya iyo kuwa Mareykanka dhammaadka sannadka 2020, xagjiriintu mar hore ayay kordhiyeen weerarada waxayna dib u bilaabeenWeeraro baaxad leh oo lagu bartilmaameedsaday bartilmaameedyo militari oo Soomaali iyo ajnabi ah oo xoogagga ka baxsan ay u diideen inay abaabulaan muddo dhowr sano ah. Xiisadda ayaa sidoo kale u fidisay afgembi dicaayad xagjiriinta, kuwaas oo ku faanay inay u caddeynayso sawirkooda dadka aqoonta leh inay yihiin dad aan awood u lahayn awoodda.
Saaxiibbada muhiimka ah ee dibedda ee Soomaaliya waxay u baahan yihiin inay wax badan qabtaan. Waxay muujiyeen midnimo layaableh oo ay ku diideen muddo kordhinta, iyadoo US, UN, AU, EU, UK iyo urur goboleedka IGAD dhamaantood soo saareen bayaano adag oo ay ku muujinayaan diidmada. Hadda waa inay ku booriyaan dhammaan jilayaasha Soomaaliyeed inay dib u bilaabaan wadahadallada. Ugu dambeyntiina AU, iyada oo loo marayo xafiiska Wakiilka Arrimaha Siyaasadda, Nabadda iyo Amniga Bankole Adeoye, oo durbaba muujiyay xiisaha loo qabo xallinta xiisadda, ayaa abaabuli doona la-hawlgalayaasha dibadda si ay u xoojiyaan diblomaasiyaddooda. Ugu horreyn, Midowga Afrika, oo gacan ka helaya saaxiibbada muhiimka ah ee dibedda, waa inuu magacaabaa ergey kaas oo la shaqeynaya wada shaqeyn lala yeelanayo ergeyga Qaramada Midoobay, waa inuu si gooni gooni ah ula kulmaa dhinacyada waaweyn oo uu ku booriyaa in wadahadallada dib loogu laabto Gaar ahaan, ergooyinkaan waa inay ku nuuxnuuxsadaan Farmaajo inuu u baahan yahay inuu aqbalo dhexdhexaadinta dibadda, iyadoo la ogyahay in mucaaradka aysan aqbali doonin wadahadalka uu isagu kormeero. Si loo wanaajiyo fursadaha uu Farmaajo ku beddeli karo booskiisa, Mareykanka wuxuu toos ula xiriiri karaa taageerayaashiisa muhiimka ah ee Qatar iyo Turkiga wuxuuna ku boorrinayaa inay ka adkaadaan madaxweynaha si uu u muujiyo dabacsanaan ballaaran, marka loo eego halista ay dhibaatadu ku leedahay xasilloonida Soomaaliya.
Jilayaasha dibadda waa inay caddeeyaan inay diyaar u yihiin inay saaraan cunaqabateyno la bartilmaameedsaday.
Marka xigta, jilayaasha dibadda waxay u baahan doonaan inay la jaan qaadaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya iyagoo ku baaqaya shir madaxeed loo dhan yahay si looga wada hadlo dariiqa loo maro doorashooyinka. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen Midowga Afrika, isla markaana ay US, EU iyo UN ka yihiin damiiniyaal, kulanka noocan oo kale ah waa in diiradda lagu saaraa sidii loo heli lahaa waqti cayiman oo doorashooyin ah toddobaadyo gudahood, halkii bilooyin laga qaban lahaa Wadahadalku wuxuu ku dhismi karaa heshiiskii 17-kii Sebtember, laakiin qasab maahan inuu ku xirnaado, maxaa yeelay qayb yar oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha siyaasadeed - Farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah federaalka - ayaa hindisay dukumintiga. Xaqiiq ahaan, si kastaba ha noqotee, doorasho kasta waxay u baahan tahay inay si ballaadhan u raacdo xuduudaha heshiiskii Sebtember 17, iyadoo la ogyahay in doorashada aan tooska ahayn ay tahay habka keliya ee suurtogalka ah ee lagu codeyn karo jawiga nabadgelyada ee maanta, taas oo ay Al-Shabaab ka taliso dhul ballaaran oo ku yaal koonfurta. - miyiga dhexe ee Soomaalida. Fikrad ahaan,
Si loo hubiyo in dhinacyadu ku dhegan yihiin ballanqaadyadooda, jilayaasha dibadda waa inay caddeeyaan inay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabateyn la bartilmaameedsanayo. Mareykanku wuxuu muujiyey rabitaan uu ku doonayo inuu tallaabo ku qaado wuxuuna ku boorriyay jilayaasha muhiimka ah inay beddelaan dariiqa iyagoo ka jawaabaya horumarkii ugu dambeeyay. Midowga Yurub wuxuu kaloo balan qaaday inuu qaadayo "tilaabooyin la taaban karo” hadii maamulka uusan ka laaban mudo kordhinta. Kuwani waa tallaabooyin hore oo togan. Dadka aqoonta sare leh ee Soomaaliya waxay u ooman yihiin sharci ahaanta la timaada aqoonsiga caalamiga ah. Kuwo badan waxay adeegsadaan baasabooro ajnabi ah inay ku safraan, hantidoodana ku haystaan ​​meel ka baxsan Soomaaliya, waxayna qoysaskooda ku sii hayaan waddamada Mareykanka ama Midowga Yurub. Hanjabaado lagu kalsoonaan karo oo lagu soo rogo mamnuucida fiisaha iyo xayiraadda hantida ayaa laga yaabaa inay si fiican diirada u saaraan maskaxda.
In kasta oo ay jiraan caqabado badan oo gudaha ah, Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay dhisto heer xasillooni siyaasadeed tobankii sano iyo badhkii la soo dhaafay. Waxa ugu xiisaha badan, dadka aqoonta sare leh ee siyaasadeed waxay sameysteen is afgarad ku saabsan maaraynta doorashada wareegyadii doorashada ee la soo dhaafay waxayna heleen waddo ay ku wada qabsan karaan codadka joogtada ah isla markaana ay kormeerayaan kala wareejinta awoodda ee nabada. Caqabada taagan - oo si sahal ah ugu dhici karta rabshado waaweyn - waxay ku hanjabeysaa inay soo bandhigto guulahaas. Madaxda sare ee Soomaaliya waa inay ku noqdaan wadahadalka.